QM “Doorashooyinka Soomaaliya waa in lagu qabto waqtiga lagu heshiiyay” | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta QM “Doorashooyinka Soomaaliya waa in lagu qabto waqtiga lagu heshiiyay”
QM “Doorashooyinka Soomaaliya waa in lagu qabto waqtiga lagu heshiiyay”
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa bogaadiyay heshiiska siyaasadeed ee laga gaaray murankii hortaagnaa qabsoomidda Doorashooyinka kadib markii wadahadal & soo bandhigista natiijada kasoo baxday muddo todobaad ah lagu soo idleeyay.
Antonio Guterres ayaa madaxda Soomaalida ugu baaqay in ay dhameystiraan hannaanka lagu hirlgelinayo qabsoomidda Doorashooyinka si looga faaiideysto fursadaha muuqda oo kasoo dhex baxay is fahamka madaxda dhexdooda.
Waxa uu bogaadiyay heshiiska oo sal u ah xasilooni, aadista doorashooyinka & ka shaqeynta in si xasiloon loo gaba-gabeeyo geedi socodka Soomaaliya si wax looga barto dhibaatooyinkii laga soo gudbay ee ka dhashay muranka doorashooyinka.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa ku baaqay in waqtiga lagu heshiiyay lagu qabto Doorashooyinka Soomaaliya si aanay waqti kale u dayacmin isla markaana la arko in ay fuliyeen ballamada madaxda.
Muqdisho waxaa khamiistii 27-ka May 2021 lagu qabtay munaasabad kulmisay Madaxda Federaalka, Dowlad-Goboleedyada, Musharixiinta, Qaybaha kala duwan ee Bulshada, Wakiilada Beesha Caalamka & shaqsiyaad kale oo muhiim u ah hirgelinta heshiiska Doorashooyinka.